သင်၏ Android - Hardware Testing & Utilities ကိုစမ်းသပ်ပါ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
generic selector တွေကို
ADW Launcher ကို Themes
အားလုံး Apps ကပ
Apex Launcher ကို Themes
အကောင်းဆုံး Apps ကပ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Apps ကပ
amp ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ Call
ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ
ကဒ် amp ဘုတ်အဖွဲ့
ကဒ် & ဘုတ်အဖွဲ့
ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ
ဟင်းချက် Apps ကပ
သတ်ပုံ Apps ကပ
Dodol Launcher ကို Themes
ပညာရေး Apps ကပ
အီးမေးလ်ပို့ရန် amp SMS ကို Apps ကပ
အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ
Entertainment က Apps ကပ
မိသားစု amp Group မှ
မိသားစု & Group မှ
ပျော်စရာ amp အားကစားပြိုင်ပွဲ
ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ
Launcher ကို Themes Go
Locker Themes Go
Google က Cardboard
ဂျီပီအက်စ် amp ခရီးသွား Apps ကပ
ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ
ကနျြးမာရေး amp ကြံ့ခိုင်ရေး Apps ကပ
ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ
hola Launcher ကို Themes
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း Apps ကပ
အင်တာနက်က Apps ကပ
အစ္စလာမ့် Apps ကပ
သတင်း amp မိုးလေဝသ Apps ကပ
သတင်း & မိုးလေဝသ Apps ကပ
Next ကိုဖွင့်တင် Themes
Nova Launcher ကို Themes
personalization Apps ကပ
ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ
productivity Apps ကပ
လုံခြုံရေး amp သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ
လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ
စျေးဝယ် Apps ကပ
စမတ် Launcher ကို Themes
လူမှု Apps ကပ
တစ်ကိုယ်တော် Launcher ကို Themes
အားကစား Apps ကပ
အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ
ZERO Launcher ကို Themes
အကောင်းဆုံး & လူကြိုက်များသော
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်း & အသုံးအဆောင်များ - သင်၏ Android ကိုစမ်းသပ်ရန်
ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်း & အသုံးအဆောင်များ APK ကို - သင်၏ Android ကိုစမ်းသပ်ရန်
ပစ္စည်းဒီဇိုင်း UI ကိုအတူထွက်ယခု V8 "သင်၏ Android ကိုစမ်းကြည့်" ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုအမှတ်တံဆိပ်ကို Android device ကို Buy ?! download, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ features တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့သင်တဦးတည်း app ထဲမှာအားလုံးဟာ android system သတင်းအချက်အလက်ရနိုင် App ကို "သင်၏ Android ကိုစမ်းကြည့်" ကြပါစို့။ ဒါဟာက Android Tablet ကိုနှင့် Android Wear အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
* အသုံးအဆောင်များ *
1 ။ ဘားကုဒ်နဲ့ QR Code ကို Scanner
2 ။ ပူဖောင်းအဆင့်
3 ။ အသံမီတာ
4 ။ လကျဆှဲမီးအိမျ
* 30 ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများ & အာရုံခံ၏စမ်းသပ်မှု *
1 ။ CPU ကိုများအတွက် real-time စနစ် Monitor, ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်
2 ။ ချို့ယွင်းချက် pixel Mode ကိုပီပြင်နှင့်အတူ LCD ကို Screen ကိုအရောင်စမ်းသပ်ခြင်း
3 ။ အသံနှင့်တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်း
4 ။ နောက်ကျော / ရှေ့ကင်မရာစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
5 ။ ဖလက်ရှမီးစမ်းသပ်ခြင်း
6 ။ Touch ကို Screen ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
7 ။ multi-touch နဲ့စမ်းသပ်ခြင်း
8 ။ အလင်းကိုအာရုံခံစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
9 ။ လက်ဗွေစမ်းသပ်ခြင်း
10 ။ မိုက်ခရိုဖုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
11 ။ Wi-Fi ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
12 ။ GPS စနစ်စမ်းသပ်
13 ။ accelerator စမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
14 ။ NFC ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
15 ။ Proximity Sensor ကိုစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
16 ။ ဆွဲငင်အားအာရုံခံစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
17 ။ ဖိအားအာရုံခံစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖို။
18 ။ သံလိုက်အိမ်မြှောင်စမ်းသပ်ခြင်း
19 ။ Android Wear ကိုထောကျပံ့
20 ။ အားလုံး Installed လျှောက်လွှာများစာရင်း
21 ။ CPU ကို / သိုလှောင်သည့်အင်ဖို။
22 ။ hardware အင်ဖို။
23 ။ ဘက်ထရီအင်ဖို။
24 ။ ကောင်တာစမ်းသပ်ခြင်း & အင်ဖိုအဆင့်။
25 ။ System ကိုအင်ဖို။
26 ။ SIM ကဒ်ကဒ်အင်ဖို။
27 ။ Wi-Fi အင်ဖိုအချက်ပြလိုက်ခြင်း။
28 ။ ဘလူးတုသ်အင်ဖို။
29 ။ တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်း
30 ။ အသံ Volume ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
- အန်းဒရွိုက် 9.0
- Samsung ရဲ့ Galaxy S9
- Samsung Galaxy Note 9
- ဂူဂဲလ် Pixel2/ Google က Pixel2XL
- LG က V30
- LG က G6
- Huawei က 20 Pro ကို Mate
- HTC က U11
- Sony Xperia XZ2
- Nokia က7Plus အား
- Nokia က 8 Sirocco
ချို့ယွင်းချက် pixel Mode ကိုပြုပြင်တာတွေအဆိုပါချွတ်ယွင်း pixels ကို fix ဖို့အာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကထုတ်လုပ်သူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ developer များတာဝန်ယူကျင်းပလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အန်းဒရွိုက်နှင့် Google က Google Inc ၏အမှတ်တံဆိပ်များမှာ
ကျနော်တို့ကအမြဲအပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုအောင်ပါတယ်။ သငျသညျအရာတစုံတခုကိုလက်လွတ်မရသေချာစေရန်, ကိုယ့်အပေါ်လှည့်သင့်ရဲ့အပ်ဒိတ်များစောင့်ရှောက်လော့။
APK ကို Download လုပ်
ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်း & အသုံးအဆောင်များ - သင်၏ Android ကိုစမ်းသပ်ရန်
ကြက်ဥ waffle 861
6.50 ကို MB
device အချက်အလက်များ: ...
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို - ...
DevCheck ဟာ့ဒ်ဝဲ ...
a Comment ချန်ထား X
ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန်
ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား
အသုံးဝင်သော Apps ကပ
App ကို Lock ကို
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
ES Explorer ကို
MX Player ကို
PDF ကို Viewer ကို
VLC Player ကို
# လူကြိုက်များသော Tags:
antivirus ဘက်ထရီ ဘလူးတုသ် နာရီ ပြက္ခဒိန် ကင်မရာ ရေတွက်ရန်ကိရိယာ အဘိဓါနျမြား Maps ကို ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို လကျဆှဲမီးအိမျ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို Locker တွေ အခမဲ့ကို Message keyboards မာလ်တီမီဒီယာ မှတ်စုများ Tools များ browsers သတိပေးချက် ဝိုင်ဖိုင်
Samsung က Keyboard ကို
Android အတွက် launchers
Instagram ကို APK ကို
မကြာမီက Apps ကပ
Launcher 2020 အသစ်များ၊ အိုင်ကွန်အထုပ်များ၊ နောက်ခံပုံများ
Markor: Markdown တည်းဖြတ်သူ - todo.txt –...
Lightning Browser - ဝဘ်ဘရောက်ဆာ
Final Fantasy Crystal ရာဇဝငျခြု Remastered Edition ကို ...
Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် Mode ကိုဒါပေမယ့်သာလျှင်အန်းဒရွိုက် 10 များအတွက်ဤတွင် Is ...
Candy Crush သူငယ်ချင်းများ Saga ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဝေးမှသင့်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4အားကစားပြိုင်ပွဲ Play
ဆက်သွယ်ရန် | directory ကို | DMCA ပေါ်လစီ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | သတ်မှတ်ချက်များ | App ကို Submit | App ကို Remove | ရွာေဖြလမ္းညႊန္ | App ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
လူအားလုံးတို့သည် applications များဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2011-2019 AppsApk ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။